Momba anay - Zhongshan Langsheng Lighting Co., Ltd.
Samy pragmatika sy idealy isika. Manolo-kevitra ny fampifangaroana kanto sy teknolojia izahay. Manohy mianatra, mitrandraka ary mampihatra ireo hevi-dalamby namboarina hatrizay izahay. Raisinay ho zava-kendrentsika indrindra ny kanto sy ny asa tanana. Ny jiro shapwence dia tsy ny olona ihany no mahatsapa hatsarana. Mifototra kokoa amin'ny fanehoana ny dikany sy ny toetran'ny fiainana amin'ny alàlan'ny lalao ankapobeny, mitarika ny tsiro amin'ny fiainana ny olona, ​​ny fomba fiainany ary ny fiheverany ny fiainana.
Manolo-tena izahay amin'ny famoronana toeram-ponenan'ny olona mahafinaritra amin'ny fampiharana tsy tapaka sy fanatsarana ny olona Fahasambarana.
Filozofia: Miezaha ny vanim-potoana vaovao hipetrahana mba hifanaraka amin'ireo teo alohany, hahatsapa ny fifangaroana sy ny sublimation, ary ny fampifangaroana hamoronana vaovao, Tsarovy ny tontolo iainana tsara tarehy.
Tsy mivadika amin'ny kalitao
Namboarina tamina fitaovana avo lenta
Avy amin'ny fanavaozana
Volavola fanao lamaody
Tsara amin'ny faharanitan-tsaina
Namboarin'ny mpanao asa-tanana efa za-draharaha
TEAM-BOKY FANARAHAM-PANJAKANA MAZAVA
Ny fikatsahana hatsarana
Ny fironana sy ny fifandonana ara-kolotsaina amin'ireo jiro sy lanternaly nandritra ny 20 taona mahery tany Shapwence dia mifamatotra, miantra amin'ny fikasana vaovao.
Ny fahitan'i Shapwence ny fiainana sy ny fikajiana ny natiora, amin'ny fikatsahana hatrany sy ny fikarohana ny hazavana, dia tarihin'ny fironana sy ny kolontsaina, mitazona ny toetra amam-panao nentim-paharazana sy ny lova ara-kolontsaina matanjaka, manilika be loatra ny fahasarotam-po, ary mitady fika. Fifanarahana sy fifandanjana.
Ny kalitaon'ny fiainana miaro dia amin'ny alàlan'ny filan'ny nofo sy fikatsahana fatratra ny trano sy ny fiainana.
Amin'ny alàlan'ny trano, ao anatin'ny tontolon'ny kolontsaina mitombo sy manankarena, tadiavo ny zavakanto tena izy eo amin'ny fiainana. Ny fiainana dia mifototra amin'ny toe-tsaina mampientanentana an'ny mpisava lalana, ka ny sivilizasiôna manana ny maha-izy azy am-bahoaka dia azo hatsangana avy hatrany am-boalohany ho kanto sy tsara tarehy, ary mampiditra fahalalahana sy kisendrasendra ihany koa.
Toe-tsaina mahazo aina sy afaka
Ny fiainana dia avy amin'ny soatoavin'ny angovo miabo ao amin'ny fanahy. Hita taratra tsy ny fahalalahan'ny habakabaka sy ny fanajana fotoana fotsiny, fa ny fomba fiainana voajanahary sy tsotra ihany koa. Manaraka ny feo anatiny izy io ary mandrisika fihetsika mahafinaritra sy mahafinaritra ary malalaka amin'ny fiainana.
Ny fitaovana tena izy no fihetsika ifotony
Amin'ny fampiasana fitaovana avo lenta, ny jiro dia mahazaka ny fikaohin'ny fotoana, ampiarahana amin'ny asa-tanana mandroso, hiantohana ny fampisehoana jiro avo lenta.
Serivisy fanodinana fanaingoana jiro
● Alefaso ny takiana ● fifandraisan'ny mpanjifa ● drafitra famolavolana ● fanamafisana ny drafitra
● Famokarana vokatra ● fanaraha-maso ny mpanjifa ● fanaterana sy fametrahana ● serivisy aorian'ny varotra
Ekipa jiro jiro
Tsy mivarotra jiro fotsiny isika
Manohy miasa mafy izahay hanazava ny habaka isam-batan'olona!
Ekipa serivisy namboarina
Mba hahazoana serivisy jiro tsara kokoa!